Iindlela ezine zokuhamba ngcono kwiGoogle Chrome | I-Androidsis
Amaqhinga okuhamba ngcono kwiGoogle Chrome
UEder Ferreño | | Ukusetyenziswa kwe-Android, Ukukopela kwe-Android, Tutorials
UGoogle Chrome ngumkhangeli we-quintessential kwi-Android. Ihlaziyiwe amatyeli aliqela kulo nyaka, kutshanje kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, njengokuba besesitshilo. Uninzi lwabasebenzisi be-Android basebenzisa isikhangeli mihla le, ke amanye amaqhinga onokuthi uhambe ngawo ngeyona ndlela ingaluncedo olukhulu.
Ke ngoko, apha ngezantsi sikushiya namaqhinga athile ngawo ukwazi ukuhamba ngcono ngeGoogle Chrome Kwi-Android. Ke, ukuba usebenzisa le brawuza kwifowuni yakho, uya kuba nakho ukufumana okungakumbi kuyo xa uyisebenzisa. Ukulungele ukufunda la maqhinga?
Ngesinye isihlandlo esidlulileyo besesikuxelele ngako amaqhinga onokuthi ufumane okungakumbi kuwo kuGoogle Chrome. La maqhinga matsha ayancedisana nesele sikuxelele wona ngomhla wabo. Ke usetyenziso olunika isikhangeli izakubangcono kakhulu ngalendlela. Zonke zilula, kodwa ngaphandle kwesidingo sokufaka nantoni na.
1 Gcina idatha ngelixa ukhangela
2 Lawula amagama okugqitha
3 Nika amandla imenyu yeChannel Duet
4 Chukumisa igama kwaye ufumane uncedo
Gcina idatha ngelixa ukhangela
Uninzi lwenu niyazi ngokuqinisekileyo, uGoogle Chrome sisicelo eso Isebenzisa idatha eninzi xa ukhangela. Ngethamsanqa, imowudi yokugcina idatha ingenisiwe kwi-app, esele sikufundisile ukuba usebenze. Ngaphandle kwamathandabuzo, ngumsebenzi oluncedo kakhulu, kuba uya kusinceda xa kufikwa ekugcineni imali encinci ekusebenziseni irhafu yethu. Kubaluleke ngakumbi ukuba usebenzisa isikhangeli rhoqo. Kuba uza kuqaphela oku kugcinwa.
Uninzi lwezicelo zisebenzisa umsebenzi ofana nale. Ke ungagcina idatha kwi Usetyenziso oluninzi kwi-Android. KwiGoogle Chrome.
Lawula amagama okugqitha
Sisebenzisa iipassword rhoqo. Sinokufaka amaphepha amaninzi apho sineakhawunti sisebenzisa isikhangeli. Ke, ukomelela kwezi-password zizinto ezibalulekileyo. Okwexeshana, sine umphathi wegama eligqithisiweyo kwiGoogle Chrome. Ngale ndlela, ukongeza ekubeni nako ukugcina okanye ukusebenzisa ngcono.
Ukongeza koku, Kubalulekile ukuba wazi ukuba ungawenza njani amagama agqithisiweyo, Ukuthintela abanye abantu ekubeni babe nokufikelela kwiiakhawunti zethu. Ngethamsanqa, kukho amaqhinga alula ngokwenene okwenza iphasiwedi eqinileyo. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngendlela enokwenzeka ngayo, ungayifunda kwesi sixhobo.
Nika amandla imenyu yeChannel Duet
Kuba kuqhelekile ukuba izikrini zikhule ngakumbi nangakumbi, kuya kusiba nzima kuthi ukusebenzisa ifowuni ngesandla esinye. Ke ngoko, kwisikhangeli sifumana umsebenzi omtsha, osivumela ukuba sisebenzise ngcono. Yayiyi-Chrome Duet, imenyu eya kuboniswa ezantsi kwesikrini. Ngale ndlela, ngesithupha, siya kuba nakho ukufikelela emazantsi esikrini.
Ukwenza lo msebenzi kuGoogle Chrome, kufuneka silandele uthotho lwamanyathelo. Zezi zilandelayo:
Bhala chrome: // iiflegi kwibar yokukhangela uze ucofe ukungena
Imenyu efihliweyo ivula kwiscreen, apho kufuneka singaguquli nantoni na kuyo
Ukuba unenguqulelo yamva nje yesikhangeli, ibha yokukhangela iya kuvela kwiscreen, kuyo kufuneka ubhale i-Chrome Duet
Cinezela ukwenza lo msebenzi (Yenza ngesiNgesi)
Qala kabusha isikhangeli ukuze utshintsho luzakugcinwa
Chukumisa igama kwaye ufumane uncedo
Omnye wemisebenzi elula esinokuyifumana kuGoogle Chrome, kodwa oko kunokuba luncedo kakhulu. Unga Chukumisa igama okanye isiqwenga kwisicatshulwa kwiphepha lewebhu. Ngokwenza oku, uya kuboniswa imenyu encinci ngeendlela ezahlukeneyo. Singakopa okubhaliweyo, sabelane, ukhethe yonke into okanye sikhangele kuGoogle. Ke ukuba ufuna ukwazi okungakumbi ngeli xesha, unokusebenzisa ngokulula lo msebenzi wokukhangela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Amaqhinga okuhamba ngcono kwiGoogle Chrome
I-Twitter iya kuvumela abasebenzisi ukuba babuyele ngokulandelelana kwexesha
I-Facebook Messenger yongeza imo yomzobo kunye nezincamathelisi eziyinyani